Amanqanaba aphakathi enxiba mhle, sihlalutya i-LG Q6 | Iindaba zeGajethi
Amanqanaba aphakathi enxiba mhle, sihlalutya i-LG Q6
Ngokungafaniyo nokhuphiswano olunjengeSamsung okanye iHuawei, I-LG yinkampani engakhange ifumane impumelelo ebonakalayo phakathi kuluhlu olude kangangexesha elide, ukuzibophelela kwayo kuluhlu lwe-G kuyizuzele ukufaneleka, kodwa kuyacaca ukuba namhlanje luluhlu oluphakathi oluphambili kummandla wentengiso emsulwa neyanzima, yile ndlela ezi nkampani zimbini zikhankanywe ngasentla ziye zazimisa ngayo ngokukhula okuninzi kwiminyaka yakutshanje, abantu baqala ukujonga okuhle, okuhle kunye nexabiso eliphantsi kwimfonomfono ephathekayo, beshiya kancinci ecaleni uluhlu oluphezulu nolukhethekileyo.
Nangona kunjalo, i-LG iye yafuna (kwaye yaziwa) ukuba isebenzise ukuthandwa okubalulekileyo okuveliswe yi-LG G6 kunye nezakhelo zayo ezincinci. Le yindlela esiyibambe ngayo I-LG Q6, imodeli enxiba ibanga eliphakathi. Makhe sibone ukuba esi sixhobo sihamba njani kwaye ukuba siyasebenza ngokufanelekileyo njengoko sihle, okanye kukho umahluko omkhulu phakathi kwezi paramitha zombini.
Njengesiqhelo, ukwenza uphononongo siza kubambelela kuthotho lwezinto ezinxulumene ngqo kwaye eziza kusenza siqwalasele. Kungenxa yoko le nto uyilo, izixhobo zekhompyutha, ikhamera kunye nazo zonke ezi zinto ziya kuphononongwa ngokweenkcukacha kolu hlaziyo. Kwakhona, siyakucebisa Sebenzisa isalathiso sethu Ukuba ufuna ukuya ngqo kwiindawo ezithile zomdla wakho, kwaye ngaphandle kokulibazisa ngakumbi siya khona.
1 Uyilo kunye nezixhobo: Uluhlu oluphakathi lubeka i-tuxedo
2 I-Hardware: Amandla ayisiyiyoyona ndawo yakho yokumisela
3 Umboniso kunye nekhamera: Umphambili ophakamileyo, umva ophakathi kuluhlu
4 Isoftware kunye nokuzimela: I-Android 7.1.1 Nougat
5 Amava ethu nge-LG Q6
Uyilo kunye nezixhobo: Uluhlu oluphakathi lubeka i-tuxedo
Kuyacaca ukuba umhlaba wefowuni oya kuhamba ugqibe uza kugxila kuqaliso olulandelayo, iifowuni ezingenachaphaza. I-LG ikwazile ukukusebenzisa oku nge-G6 yayo emnandi ebonakaliswa kwisipili kule LG Q6. Esi sixhobo sinesithuba esingaphantsi kweesentimitha ezili-13 zescreen, ngelixa ububanzi buyimilimitha ezingama-69,3, kunye nobukhulu beemilimitha eziyi-8,1, konke kuhamba ngamanyathelo 149 iigram zobunzima. Sijongene nesixhobo apho i-ergonomics ifundwe khona, ngaphandle kwamathandabuzo.
Amacala (ngokusisiseko i-chassis) enziwe IAluminiyam 7000, efanayo naleyo isetyenziswa ziimpawu ezinje ngeApple yezixhobo zazo, ezisinika ukudibanisa uyilo, ukuxhathisa kunye nokukhanya ngokulinganayo. Inyani yile yokuba ialuminium ijongeka intle. Kwicala lasekhohlo siza kufumana amaqhosha amabini evolumu, ngelixa icala lasekunene lithotyelwe kwitreyi yeSIM khadi kunye neqhosha laMandla.
Kuyilo langaphambili sele sikwazi oko sinako, Iscreen esibukekayo esineshumi elinantathu-intshi isibuko esigcweleyo ngeekona ezijikeleziweyo. Kwindawo ephezulu isakhelo esincinci sifihla izivamvo, isithethi kunye nekhamera yangaphambili. Kwinxalenye engezantsi sinelogo ye-LG embindini kuphela. Ngasemva siya kufumana iglasi epeyintiweyo, kunye ne-Q6 ebonisa, ezantsi ngasekhohlo sinesithethi, kwaye phezulu ikhamera enombala omnye.
I-Hardware: Amandla ayisiyiyoyona ndawo yakho yokumisela
Ukuba noyilo yenye yezona smartphones zintle kwintengiso ziza ngexabiso, asinakukhetha ngaphandle kokuba siqwalasele ukuba ezona zixhobo zinamandla kwintengiso zifihliwe phantsi kolo hleko lomtsalane, siya kuba ngqo phambi kwe-LG G6. Kulapho aqala khona amahla ndenyuka. Ukuhambisa iscreen esipheleleyo siza kufumana iprosesa I-Qualcomm Snapdragon 435 yoluhlu oluphakathi olungenakuphikiswaUbuncinci, ukuhamba nale processor siza kufumana okujongwa kakuhle I-3GB ye-RAM kunye ne-32GB yeROM (yokugcina), edibeneyo ibonakalise ukuba ingaphezulu ngokwaneleyo ukuba isuse ezona zicelo zichaphazelekayo kwiGoogle PlayStore.
Ngokumalunga nonxibelelwano esinalo LTE Ikati 6 Ukuqinisekisa ukuhamba kakuhle kwedatha ephathekayo, iBluetooth 4.2, iWi? Fi 802.11ac kunye neenkcukacha liqela le-LG, into iinkampani eziyilibalayo ngakumbi nangakumbi, a I-Radio yomsakazo bonke abaphulaphuli. Isithethi esingasemva silwa umva, ivakala intle, nangona imeko yayo idale unxunguphalo ekusetyenzisweni kwayo kwemihla ngemihla.
Nazi ii-pluses, kodwa ngoku siza kuqwalasela ii-minus. Kwindawo yokuqala, isixhobo sinengxaki kwimbono yam sesona siphako saso sikhulu, ayinaso isivamvo somnwe, okwangoku unokuyibeka njengenye yezixhobo eziphakathi kwinqanaba eliphakathi elingenalo, nangona linokuqondwa kobuso be-Android, umfundi ofaka iminwe uye waba ngumgangatho ofunwa kakhulu ngabasebenzisi abaninzi, kwaye ngaphandle kwayo mna ngekhe ndazi ukuba mandiphile kanjani. Enye inkcukacha yokugcina engqondweni kukuba ayinayo i-TrueTone flash, into esiza kuthetha ngayo kamva.
Umboniso kunye nekhamera: Umphambili ophakamileyo, umva ophakathi kuluhlu
Isikrini siyamangalisa nge-intshi ye-5,5 enamaqhosha abonakalayo, Xa isetyenziswe ngokukhawuleza, isinika imibala eqaqambileyo kwisisombululo esifanelekileyo, ngaphezulu ngaphezulu kolunye uluhlu oluphakathi, kunye 2160 x 1080p Esinika inani elipheleleyo lee-pixels ezingama-442 nge-intshi nganye. Inyani yile yokuba ukukhanya kuhle kakhulu (ngaphezulu kwe-600 nits) njengoko ubona kwiifoto zoqwalaselo. Kwinqanaba layo 18: 9 umbono Ikushiya ngokukhawuleza, iyifowuni ephathekayo ebamba amehlo abo bajikelezileyo abanakukwazi ukufumanisa ukuba sijamelene noluhlu oluphakathi okanye uluhlu oluphezulu, icandelo langaphambili lisebenze kakuhle kakhulu Inkampani yaseKorea kule LG Q6. Asinakulibala ukuba sinayo Umbono weDolby / HDR.
Kufuneka iqatshelwe ukuba iphaneli engaphambili ayinayo iphaneli ye-2.5D, yiGorilla Glass (njengasemva), kodwa ukuba nemiphetho ethe tyaba kungothusa namhlanje. Kwelinye icala, olu luyilo luthanda ukusetyenziswa kweglasi enomsindo ukukhusela, phakathi kwezinye izinto, ngaphandle kwento yokuba I-LG Q6 ineziqinisekiso ezininzi zokumelana, kungabandakanyi enye yokuxhathisa amanzi.
Ikhamera yangaphambili inayo inzwa ye-13MP ekhusela kakuhle kwiimeko ezifanelekileyo zokukhanya, enokuthi mhlawumbi ithathe ixesha elide kunokuba ifanele ukufota iifoto, into eqondakalayo phakathi kuluhlu oluphakathi. Nangona kunjalo, kwimeko yangaphakathi okanye ekukhanyeni okuphantsi, ingxolo iya kuba liqabane elithembekileyo kwiifoto zethu. Kwikhamera yangaphambili siza kuba ne-5MP kuphelaNangona kunjalo, iyazikhusela kakuhle ngokujonga i-engile yayo ebanzi ekwaziyo ukuthatha 100º umfanekiso. Inyani ngokuqinisekileyo ikukuba kwinqanaba lekhamera i-LG Q6 ngokusisiseko inika into ethembisayo, phakathi kwezinye izinto sibona iinkcukacha ezinje ngokusilela kwesibane esidanyazayo.
Isoftware kunye nokuzimela: I-Android 7.1.1 Nougat
Kwinqanaba lesoftware siza kudibana Android 7.1.1 Nougat, Ihlaziyiwe ukuze ibe namandla angaphezulu. Nangona kunjalo, uyazi kakuhle oko I-LG inomaleko wayo wobuqu ukuzimisela kwabo malunga nokufuneka kwayo siya kuyishiya incasa yomsebenzisi ngamnye. Inyani yile yokuba ngaphandle kokucaphukisa kakhulu, uyilo lwayo olujikeleziweyo kunye noyilo olucekeceke luyathandeka, kwelinye icala, sinezicelo ezithile ezifakwe kwangaphambili ukuba uninzi lwabasebenzisi banokukhetha ukungazihoyi, kodwa ukuba sinokukhubaza ngokomgangatho kwiseshoni yeseto.
Ngokumalunga nokuzimela siya kuba nako 3.000 mAh, ngakumbi i-300 mAh ngaphantsi kwe-LG G6, ke ngokuthathela ingqalelo isikrini esimangalisayo kodwa esinexabiso, kunye neprosesa ekumgangatho ophakathi, sikwazile ukufikelela esiphelweni sosuku kunye nenxalenye elandelayo ngaphandle kwengxaki ezininzi. Nokuba yeyiphi na, ibhetri iya kufikelela kuthi kusuku lokusetyenziswa kuninzi lwabasebenzisi, ke ukusebenza ngokuzimela sijamelene nesixhobo esenza umsebenzi waso kwaye asizukusibangela iintloko ezininzi.
Amava ethu nge-LG Q6
Nge-LG Q6 siqinisekisa isixhobo esihle kakhulu, siyilelwe ngohlobo olukhulu, kwaye kuya kuba nzima ukutsho ukuba sisebenza ngesixhobo esiphakathi kwinqanaba. Icandelo lobuhle kunye nescreen sayo esimangalisayo ngokungathandabuzekiyo lelona lixhasa i-LG Q6. Ngokubhekisele kwizixhobo zekhompyutha, kuyinyani ukuba sijamelene noluhlu oluphakathi olungazimiselanga ukuzibonisa, kangangokuba sinokuthi sijongane neprosesa emfutshane ethe kratya, nangona kunjalo, i-3GB yememori ye-RAM isivumele ukuba sibaleke ngaphandle kweengxaki zesicelo semihla ngemihla. Mhlawumbi imozulu yiyo ephelisa ukumisela ukusebenza kweprosesa, xa iiapps ziqala ukufuna ngaphezulu.
Kodwa i-LG Q6 inezibane zayo kunye nezithunzi zayo, ukuqala kwenyani engaqondakaliyo yokuba bakushiyile ukufakwa kwesifundi somnwe, intshukumo edale unxunguphalo olukhulu ekusetyenzisweni kwayo. Kwelinye icala, ezinye iinkcukacha ezinje ngokusetyenziswa kweMicroUSB endaweni ye-USB-C, okanye inyani yokuba sinekhamera ethintelwe ngokufanelekileyo ngombala omnye wombala, zisa ubuqaqawuli esijamelene nabo. isixhobo esingqingqwa saphakathi kuluhlu esixabisa i-euro ezingama-349.
Ngaphandle kokufunda ngeminwe
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Amanqanaba aphakathi enxiba mhle, sihlalutya i-LG Q6
INokia 8, konke malunga neflegi yeNordic yamva nje